Mashape dia mampifandray ireo mpamorona sy API | Martech Zone
Alahady, Martsa 2, 2014 Douglas Karr
Nandritra ny fotoana lava indrindra, ny goto nataoko hitadiavana API dia Web programable - saingy mety niova izany rehefa avy nandinika Mashape. Ny Mashape dia tsy lahatahiry API azo tadiavina fa mampifangaro ilay API mivantana ao amin'ny trano fitehirizan'izy ireo. Io dia ahafahanao misoratra anarana, mahita ary mizaha toetra an API tsy misy sarotra mihintsy.
Ity ny lisitry ny tombontsoa sy ny endri-javatra:
Ny zavatra rehetra amin'ny toerana iray - mitadiava vondrona API hahafahanao misafidy, mifidy ary mampitaha API amin'ny toerana iray.
Iray fahazoan-dàlana iray - Mashape dia manome anao fahazoan-dàlana hiditra amin'ny API rehetra laniana amin'ny rindranasao.
Mifandraisa amin'ny Developers - Rafitra fandefasan-kafatra anaty sidina sy fikorontanan-tsolika hanamorana ny fifandraisana eo amin'ny mpamorona.
Andramo alohan'ny kaody - tafiditra API antontan-taratasy sy ny console console dia mamela anao hiaina an API tsy misy fanoloran-tena.
lalana API fampiasana - lalina Analytics, tatitra, lesoka ary fampiasana ny fisoratana anarana API-nao marobe amin'ny toerana iray.
Tranomboky mpanjifa marobe - misafidiana fiteny fandefasana programa ary alatsaho ao amin'ny tetikasanao ny tranomboky.
Fitsinjarana eo noho eo - avoaho ny saim-bahoaka API ary lasa azon'ny mpamorona mavitrika an'arivony izy io. Azonao atao koa ny manampy manokana API ary miasa miaraka ao anatin'ny fikambanana misy anao.
Fast API Tonian-dahatsoratra Doc - mamorona na manova ny antontan-taratasinao manokana na ampahibemaso, ahafahan'ny mpamorona mahatakatra haingana sy mandany ny API misy anao.
Olana ateraky ny fiaraha-monina - Mamorona, maneho hevitra ary araho an API hamoaka tatitra momba ny hadisoana na tsy fahombiazana.
Mora manangona API - Manolora safidin'ny faktiora ho an'ny daholobe na tsy miankina. Mamaritra ny mason-tsivana rehetra momba ny vidiny ianao, toy ny antso na zavatra tsy manam-paharoa; ary koa ny fahaizana mamorona drafitra maro sy setrin'ny endri-javatra.
API Status sy Filazana - jereo ny satan'ny API, ao anatin'izany ny latency sy ny isan-jaton'ny uptime. Mandefa fampandrenesana momba ny olana sy ny fanavaozana ny fampisehoana izahay.
Analytics fitantanana - isan'ny API antso, tahan'ny fananganana ny mpampiasa mampiasa ny API anao, ary ny haben'ny hadisoana.
Tags: APIapisfampiharana interface tsaramahita api